OEM / ODM Shiinaha Fleet socodka Device, Baaskiilka GPS Tracker warshad iyo alaab | Roadragon
OEM / ODM Shiinaha Fleet qalabkan raadraaca, Baaskiilka GPS Tracker
Waxaan hadda leeyihiin shaqaale aad u waxtar fiican in la weydiimaha ka macaamiisha ka qabtaan. Hadafkayagu waa "100% fulinta macaamiisha by our alaabta ama adeega aad u fiican, iibinta qiimaha & adeega markabka our" iyo raalli ahaansho caan weyn ka mid ah macaamiisha aad u hesho. Iyada oo badan oo warshadaha, waxaan ku siin karaan ballaaran kala duwan ee OEM / ODM Shiinaha Fleet socodka Device, Baaskiilka GPS Tracker, Maxaa yeelay, ayaa aaminsan! Waxaan si daacad ah u soo dhaweyn ah macaamiisha cusub dibada in isdhexgalka ganacsi ganacsi Mudanayaasha iyo sidoo kale in la EXP ...
Aragdarnaan: 88mm x 50mm x 17mm
Dareen GPS: -159dBm
Sax GPS: 10M
Battery: dhis-in 3.7V 370mAh Li-ra'iyi batari
aqbasho danab: 9-75V
Waxaan hadda leeyihiin shaqaale aad u waxtar fiican in la weydiimaha ka macaamiisha ka qabtaan. Hadafkayagu waa "100% fulinta macaamiisha by our alaabta ama adeega aad u fiican, iibinta qiimaha & adeega markabka our" iyo raalli ahaansho caan weyn ka mid ah macaamiisha aad u hesho. Iyada oo badan oo warshadaha, waxaan ku siin karaan ballaaran kala duwan ee OEM / ODM Shiinaha Fleet socodka Device, Baaskiilka GPS Tracker, Maxaa yeelay, ayaa aaminsan! Waxaan si daacad ah u soo dhaweyn ah macaamiisha cusub dibada in isdhexgalka ganacsi ganacsi Mudanayaasha iyo in sidoo kale la filaya in ay sii xoojiyaan xiriirka iyadoo la isticmaalayo rajada muddo dheer la aasaasay.
Waxaan hadda leeyihiin shaqaale aad u waxtar fiican in la weydiimaha ka macaamiisha ka qabtaan. Hadafkayagu waa "100% fulinta macaamiisha by our alaabta ama adeega aad u fiican, iibinta qiimaha & adeega markabka our" iyo raalli ahaansho caan weyn ka mid ah macaamiisha aad u hesho. Iyada oo badan oo warshadaha, waxaan ku siin karaan ballaaran kala duwan ee GPS Tracker ,GPS Socodka Device ,Nidaamka raadraaca gps, shirkadda Our ayaa horey u mari ISO caadiga ah oo aan si buuxda u ixtiraamaan shatiyada macaamiisha 's iyo xuquuqda daabacaada. Haddii qofka macaamiisha ah siisaa naqshado iyaga u gaar ah, waxaan ballan qaadi doonaa in ay laga yaabaa in mid ka mid ah oo keliya ku yeelan karaan Ganacsi iyo in. Waxaan rajeynaya in la waxyaabaha wanaagsan noo keeni kartaa macaamiisheena nasiib aad u weyn.
Dhammeeyey wax tayo sare leh,, raagaya, biyuhu, dustproof, ka hortagga dabka bey'ada saaxiibtinimo.
Dhis-in GPS gaadiidka goobta. Taageerada GSM 4-noqnoqoshada 850/900/1800/1900 MHz oo shaqeyn karaan caalamka oo dhan.
Taageerada ay ula socdaan cinwaanka waqtiga dhabta ah by link Google, taageero GPS / Glonass / Galileo / Compass afar satellite kala duwan.
Taageerada Geo Alarm xayndaabka, Main Power Off Alarm, meesha hal, In ka badan Speed ​​Alarm, Power Low
Time Si Fix First
xaaladda Cold 35-80s
35s xaaladda diiran
1s xaaladda Hot
Dhis-in 3.7V 370mAh Li-ra'iyi batari
-20 ° C si + 55 ° C
5% -95% non-isu keenida
Nooca Item: GPS Tracker
Uumi Operating: 5% ilaa 95% Non-isu keenida
Dhisay Capacity Battery: 350MA
Aragti: 3,54 x 1.97 × 0,79 ee (90x52x20 mm)
miisaanka Net: 2.3oz (67g)
dhererka Cable: 3.28ft (1)
1 x Guide Quick
Velcro 1 x
Previous: Design Gaarka ah 16p Lkcl216 Obd II Si Xh2.54 8pin Cable Iyada oo 30cm Neck
Next: tayo wanaagsan leh Original Autel Autolink Al519 Obd-ii Oo Can Scanner Tool Multi-luqadood
GPS Socodka Device
Nidaamka raadraaca gps
2018 saarka Daalacanayo baabuur sale kulul obd fiidmeerta muddo dheer ...